Taxanaha Premier League: Faaqidaada Kulamadii Todobaadka, Dabaqa Sare Iyo Kan Hoose Ee Kala Sarraynta Horyaalka, Rikoorada Diiwaan-ka Galay , Faahfaahiinta Goolasha Rooney, 2-dii Ugu Fiicnaa Iyo 2-dii Ugu Xumaa Saxiixyada Chelsea 10-kii Sano Ee U Danbaysay – Kooxda.com
Home 2017 January Ingiriiska, Taxanaha Bar/Ingiriiska, Wararka Maanta Taxanaha Premier League: Faaqidaada Kulamadii Todobaadka, Dabaqa Sare Iyo Kan Hoose Ee Kala Sarraynta Horyaalka, Rikoorada Diiwaan-ka Galay , Faahfaahiinta Goolasha Rooney, 2-dii Ugu Fiicnaa Iyo 2-dii Ugu Xumaa Saxiixyada Chelsea 10-kii Sano Ee U Danbaysay
Taxanaha Premier League: Faaqidaada Kulamadii Todobaadka, Dabaqa Sare Iyo Kan Hoose Ee Kala Sarraynta Horyaalka, Rikoorada Diiwaan-ka Galay , Faahfaahiinta Goolasha Rooney, 2-dii Ugu Fiicnaa Iyo 2-dii Ugu Xumaa Saxiixyada Chelsea 10-kii Sano Ee U Danbaysay
January 23, 2017 · by	Abdi Hamid Zaciimka · 1
Barnaamijkeena maanta hadii Eebbe ina haleel siiyo waxaan kusoo qadan doonnaa qodobo ay u horeeyaan :Faaqidaadda iyo falanqaynta kulmaadii todobaadka, Rikoorada ilaa haatan laga diiwaan geliyay Premeir League-ga, Jadwalka kala sarraynta horyaalka,Rikoorada ilaa haatan laga diiwan geliyey Premier League, faahfaahin gaaban oo ku saabsan rikoorka goolasha Weyne Rooney iyo sida u u kala dhaliyey. Iyo qodob xiiso badan oo aan farat ku fiiqi doono labadii saxiix ee ugu wanaagsanaa iyo labadii ugu xumaa ee ay 10-kii sano ee ugu danbeeyay samaysay kooxda Chelsea.
Halkan guji si aad noola soo xidhiidhid
Faqidaada Kulamadii Todobaadka.
Todobaadkii 22-aad ee horyaalka Premier League waxa la ciyaaray kulamo tiro badan iyadoona ay kasoo baxeen natiijooyin xiiso leh, hadii aan soo koobnana kooxda Liverpool ayaa la kulantay guuldarro aysan filaynin, sidoo kale United ayaa barbaro lagu qabtay , City iyo Tottenham way isku barbar dhaceen, Leicester 3 ayaa lagu karbaashay, kooxda Arsenal waxa ay kulan la yaab leh ka badisay kooxda Burnley oo geesinimo muujisay, kooxda hogaamiyayaashuna waxa ay halkoodii kasii wadaan gumaadka iyagoona 2-0 uga badiyay kooxda Hull City.
Macallin Klopp xalay waa uu ku saxnaa inuu xilli hore garoonka ka saaro Philippe Coutinho maadaama uusan wax saamayn ah ku dhex lahayn garoonka gudihiisa keligiisa ma uusan mudnayn in la saaro balse hadii bedelka la badin lahaa waxaa la saari lahaa xiddigo ay u horreeyan Adam Lallana iyo Henderson.
Khaladka keli ah ee uu macallin Klopp sameeyay kulankaan gudihiisa ayaa ahaa inuu garoonka ka saaray Emre Can kaas oo ahaa xiddiga keli ah ee ka shaqaynayey khadka dhexe ee kooxda, khaladkaasna waxa isla markiiba ku ciqaabay Sigurdeson Gylfi Sigurdsson iyo Carroll oo khadka dhexe soo jiidhay ka hor inta uusan dhashan goolka saddexaad.
Sidoo Kale kooxda Liverpool ayaa ka markhaati kacday inay si degdeg ah ay ugu baahan tahay bedelka Sadio Mane , waxaadna arkaysay Liverpool oo caga jid ah isla markaana aan garanayn sida loo qaado weerarka degdega ah .
Ma aysan muuqan ciyaartii madadaalada ahayd ee kooxda Liverpool soo bandhigi jirtay xataa marka ay guul darraysanayso, Coutinho ma uusan u qalmin dalabka Barcelona hadii la qiimeeyo bandhigiisi xalay, Origi waa nuune weli, Wijnaldum waa xiddig Championshipka laga soo iibsaday Liverpoolna waxay habeenkaa ahayd koox aan taageerayaasheeda aan xata anigu ku jiro aanay ku raaxaysan karin.
In kasta oo uusan horyalku dhawayn hadana hadana hanashadiisu cida ay u carbuunan tahay adigu noo sheg [waa chelsea saw maaha ] laakiin dagaalka ugu weyni waxa uu haatan yaalla 4-ta sare.
Halkan ka akhri warkii kulankaas.
Weyne Rooney Wuxuu noqday xiddiga abid ugu goolasha badan kooxda Manchester United, taas waxay la micno tahay in uusan haatan hawl kale ugu hadhin United isla markaana uu ka tegi karo. Magaran karno meesha uu qaban doono balse China waa dookh u banaan wayo aragaan.
Cajiib ayuu ahaa goolkii Rooney waxaana qiimo u yeelay wakhtigii uu dhaliyey ee uu kooxda United dhibic ugu soo fara maroojiyay isla markaana kooxdiisa usii ilaaliyay rikoorkeeda guuldarro la’aanta kaas oo haatan maraya 17 kulan oo xidhidh ah.
United waxay ahayd nasiib laawayaal kulankaan , gool ayay iska dhaliyeen , fursado ayay dayaceen, Kuwa kale Grant ayaa ka badbaadiyey balse nasiibkoodu waxa uu soo galay daqiiqadii 72’aad waxa uuna noqday Rooney oo dhanka kale dhaliyey goolkiisi labaad ee Premier League xilli ciyaareedkaan.
Dhanka kale kooxdaStoke ayaa laga hor istaagay guushoodi isku xigta ee Premier League balse waa wax lagu faani karo in kooxda United aad minan iyo martiba dhibcaha la qaybsato.
Si Kataba United waxa ay hada fadhisaa kaalinteedii 6’aad ee kala sarraynta horyaalka iyada oona leh 41 dhibcood.
Halkan ka akhri warka kulankaan
Hadii aan laba odhaahood kusoo koobno gebi ahaanba kulanki sabtidii ; Kooxda Tottenham waxa guul ka hor istaagay shabaq ilaaliyaheeda Lloris City-na waxa saddexda Dhibcood u diiday Raheem Sterling!!! Sabab?
Gebi ahaanba sabtidii waxay ahayd habeen uu iska ilaawo goolahye Lloris maadama uu labada gool ee kooxda City uu isaga caawinteeda lahaa isla markaana laba khalad oo aad u xun uu galay isla markaana uu hadyad ahaan u siiya Leroy Sane iyo Kevin De Bruyne.
Dhanka City Raheem waxa uu ahaa anaani keligiis Cune ah, waxa uu rikoore ka dayayey meel aan rikoore ku jirin balse waxa uu ka faaidaysan waayey markii rikooraha saxda ah lagu galay , keliya waxa uu u baahnaa inuu dulka is dhigo marka uu dareemo in dhabarkisa gacani saaran tahay si katabana waxa lagu tilmami karaa xiddigii ugu xumaa kooxda City Kulankii xalay.
Yaynaan illaawin Goolhaye Bravo, anigu ma garanayo sida uu ninkaan boos uga haystay kooxda Barcelona mana garan karo sababta mar walba loogu tilmaami jiray mid kamid ah goolhayayaasha ugu fiican yurub keliya waxa aan ogahay in lixdii darbo ee lagu tuuray goolkiisa ay lixduba gool noqdeen, xalayna jilicsnaantiisa iyo gacan culayskiisa ayuu u dhashay goolkii labaad ee Son.
Muxuu u baahan yahay Guardiola ? maxaa ka dhiman marka uu haysto Aguero, Silva , De Bruyne iyo qar kale oo ka mid ah xiddigaha ugu fiican horyaalka?
Keliya waxa uu u bahan yahay inuu soo iibsado xiddigo u gaajaysan inay guulo gaadhaan , uma baahna xiddigo keliya doonaya inay lacagtya carbeed jaqaan , waxa uu u baahan yahay qof yaqaana sida loo guulaysto , uma baahna xiddig sida Aguero maalin walba lagu ganaaxo inuu tababarka kasoo habsaamay .
Alla Maxay ciyaar ahayd! kulankii todobaadkaee Premier League . kadib markii garoonka laga saaray Arsene Wenger Ben Wee waxa u ahaa ninka qoorta ka laaday Laurent Koscielny isla markaana Rikooraha ku keenay kooxdiisa Burnley, balse Alex Sanchez ayuu ahaa xiddiga rikooraha dhaliyey isla markaana Guners soo istaajiyay kaalinta labaad.
Haatan Kooxda Arsenal waxay ka sarraysaa dhamaan kooxaha horyaalak marka laga reeebo….. haa! marka laga reebo Chelsea , Gunners-na waxay isku dayaysaa in sannadkii labad oo isku xigta ku dhamaysato meel ka sarraysa booska 4-aad . oo ay xalay ka kacday.
Guuldarrada kasoo kow macallin Dyche waxa uu kulankaan isticmaalay caqli isagoona kusoo ciyaray 5 khad dhexe si uu u tirtiro awooda khadka dhexe ee kooxda Arsenal Balse si dabiicyan ah ayuu u laciifsanaa khadka kooxdaasi maadama uu joogay Xhaka oo keliya 65 daqiiqo ciidaminayey kooxdiisa isla markaana casaan qaatay.
Waa markii shanaad tan iyo bilawgii xilli ciyaareedkii hore ana jiro xiddiga ka ciyaara shanta horyaal ee Yurub kaas oo shan jeer laga saaray garoonaka sidoo kale waa markii sagaalaad ee xiddigaan loo taago kaadhka guduudan .
Habdhaqankaas foosha xun waxa uu dhabar jab ku yahay tartanka horyaalka ee kooxda Arsenal kaas oo aan imikaba luga adag ku taagnay sidoo kale waxaad moodaa in macallin Wenger uu soo kululaanayo .
“Wax Rikoore kamaan arkayn meesha aan joogo, balse waxa ay ahayd in aan aamuso isla markaana aan raali gelin bixiyo xataa hadii aan si xun u xanaaqay” ayuu Wenger yidhi isagoo faraha taagtaagaya.
In Kasta oo uu raali gelin ka bixiyay hadana Wenger waxa uu la kulmi karaa ganaax maadaama uu riixay garsoore Tylor.
Todobaadkii hore booska kaalinta koowaad ee kooxda Chelsea waxa uu u muuqday mid aan sii waarayn isla markaana aan amaan dareemayn. kadib markii ay ay 5 dhibcood lagu so yareeyay farqiga goolasha isla markaana shaki la galiyey mustaqblka weeraryahankeeda Costa.
Sideed cisho ayaa ina dhaafa Costana gool ayuu lasoo laabtay waxaana uu kooxdiisa ka caawiyay inay sideed dhibood oo nadiif ah ka sarrayso kooxda Arsenal oo kaalinta labaad ku jirta isla markaasna ah kooxda 2aad ee badisay todobaadkan marka laga hadlayo 6-da sare.
Waa guushii 15’aad ee ay chelsea gaadho 16-keedii kulan ee ugu danbeeya sidoo kalena waa kulankii 13aad ee ay shabaqeeda ilaashato taasna waa tallaabo kale oo kooxdani u qaaday hanashada horyaalkoodii lixaad.
Hadii ay ka gudubto Liverpool iyo Arsenal uma baahnid inaad mar kale tidhaahdo weli tartan ayaa nool balse waxa aad keliya xaqiiqsanaysaa in chelsea sannadkaan horyaa;ka leedahay.
Dhanka kale khadka dhexe ee kooxda Hull Rayon Mason ayaa qoorta ka jabay iyadoona xiddigaan 8 daqiiqo lagu dhex dawaynayey garoonka waxaana ugu danbayn loola cararay cusbitaalka kadib markii uu jug kala kulmay daafaca kooxda Chelsea ee Gary Cahill.
Hataan Dabaqa Sare Iyo Kan Hoose Ee Kala Sarraynta Horyaalku Sidan Ayuu U Eegyahay.
Rikoorada Ilaa Haatan Lag Diiwaan Geliyey Premier League.
Liverpool ayaa qaybta hore ee kulan ay ku ciyaarayso Anfield guuldarraysatay inay samayso shuut ku began goolka waana markii u horraysay tan iyo November 2015.
Llorent ayaa kulankii Liverpool dhaliyey goolashiisi u horeeyay ee meel ka baxsan garoonkiisa 6diisii gool ee hore waxay ku dhasheen Libert Stadium.
Liverpool ayaa noqotay kooxdii u horraysay ee xilli ciyaareedka dhalisya 50 gool sidoo kale Swansea City ayaa ah kooxdii u horreysay ee laga dhaliyo 50 gool.
Liverpool ayaa markii labaad 3 gool looga dhaliyey Anfield iyaga oo uu tababare u yahay macallin Klopp sidoo kale Liverpool ayaa laga joojiyay rikoorkii guuldarro la’aanta Anfield 17 kulan ayaanay guuldarro kula kulmin Anfield
Stoke City ayaa bilaa guuldarro ah saddexdii kulan ee u danbeeyay ee ay gurigeeda ku marti qaaday Manchester United.
Markii ugu danbeeyay ee koxda Sunderland ay guul ka gaadho dhigeeda West Brom waxa ay ahayd January 2006-dii welina halkii ayay kasii socotaa musiibadii.
3 kamid ah 7-dii gool ee ay kooxda United iska dhaliso waxay ay yimaadeen kulamada ay ka hor tagto Stoke.
Weyne Rooney ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan leh kooxda United waxaana u haatan rikoorkaas ku haystaa 250 isagoona ka sara maray Sir Bobby Charlton.
Weyne Rooney ayaa dhaliyey 88 gool oo marti ah waana in ka badan xiddig kasta oo horyaalka ka ciyaara sidoo kalena waa rikoor.
Hugo Lloris ayaa laga dhaliyey 12 gool afartii kulan ee ugu danbaysay ee uu ku ciyaaray Etihad Stadium.
Dele Alli ayaa iika dhaliyey goolal ka badan intii uu xilli ciyaareedki hore dhaliyey .
Dhamaan Barvo ayaa laga dhaliyey 16 kedib 24 jeer oo goolkiisa la beegsaday.
Manchester City ayaa ku fashilantay inay guul gaadho kulan ay laba gool la hor martay waana markii u horraysay tan iyo December 2014-kii.
Kooxda Arsenal ayaa dhalisay 12 gool oo madax ah xilliciyaareedkan waana in kabdan koox kasta oo ka ciyaarta horyaalka.
Kooxda Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan laga dhaliyey 7 rikoore waana in kabadan dhamaan kooxaha kale ee horyaalka.
51:35 kow iyo konton daqiiqo iyo soddon iyo shan ilbiriqsi waa goolkii ugu mudada dheeraa ee la dhaliyo qaybta hore ee kulan horyaalka ah tan iyo intii la bilaabay diiwaan gelinta rikoorada
Costa ayaa sidoo kale caawin ka helay 7 xiddig oo kala duwan xilli ciyaareedkan
Keliya Ryan Giggs (162) iyo Frank Lampard (102) ka caawin badan Cesc Fabregas (101) balse waxa uu haatan la siman yahay W Rooney.
Macluumaad Ku Saabsan Goolkii Xalay Ee Weyne Rooney
Waa goolkii labaad ee uu ka dhaliyo Premier League Xilli ciyaareedkaan, Hore waxa uu uga dhaliyey Bournemouth.
goolashiisan 250ka ah ee uu u dhaliyey kooxda Manchester United , kan waxa uu ahaa midkii 11-aad ee uu dhaliyo 90-ka ama ka danbeysa wana midkiisii lixaad ee uu ku dhaliyo laad xor oo toos ah
180 ka mid ah goolashaas waxuu ka dhaliyey kulamada Premier League, halka 39-ka baaqiga ahna uu ka dhaliyey kulamada European.
136kamid ah goolashaas waxa uu ku dhaliyey Old Trafford , 106ka soo hadhayna waxa uu ku dhaliyey garooomada kooxaha kale
Rooney 193 waxa uu ku dhaliyey lugtiisa midig , 27 lutiisa bidix 30ka soo hadhayna waxa uu shabaqa ku ruxay isaga oo isticmaalaya madaxiisa.
Labadii Saxiix Ee Ugu Fiicnaa Iyo Labadii Ugu Xumaa Ee Ay Kooxda Chelsea Samayso 10-kii Sano Ee U Danbeeyay.
Waa khalad hadii aan dhaho kooxda Chelsea waxba kama aysan bedelin gebi ahaanba wejiga suuqa kala iibsiga horyaalka Premier League sannadihii 2000-meeyadii markaas oo koxda uu la wareegay maalqabeenka Ruushka ah ee Roman Ibramovich kaas oo suuqa la gelaayey qarashaad waali ah oo kusooo qaadnaayo magacyo waawey oo xidigaha yurub ah.
Si kastaba Chelsea waxa ay ku faa’iday qaar kamid ah saxiixyadii ay sameysay waxayse sidoo kale in badan ku khasaartay xiddigo ay lavag badan kasoo bixisay, hadii ay ku faa’iday Drogba waxay ku khasaartay Mateja Kezman iyo Andre Shevchenko , hadii ay ku faa’iday Ivanovic waxay ku khasaartay.
Hadaba Kooxda.com waxay idiinsoo bandhigi doonataa labadi ugu fiicnaa iyo labadii ugu xumaa saxiixyadii kooxda Chelsea 10-kii sano ee u danbeeyay.
2-da Ugu Fiican.
Ma shakibaa ku jira inu yahay saxiixii ugu fiicnaa ee ay kooxda Chelsea samayso 10-kii sano ee ugu danbeeyay ? maya !
Xiddigaan heerka caalami ee qaranka Belgium ayay xilligii uu kusugnaa Lille doonayeen kooxo badan oo Premier League ah oo ay u horrayso kooxda United , balse xiddigaan ayaa iska diiday inuu ku biiro United si uu lacag 32 million ah ugu biiro kooxda Chelsea.
Hazard ayaa kooxda Chelsea u saftay 228 kulan waxaana u dhaliyey 62 gool, waxana uu door muhiim ah ka qaatay guushii kooxda Chelsea ee Europe League iyo sidoo kale guushi kooxda ee horyaalka ee xilli iyaareedkii 2014-15 markaas oo loo magacaabay xiddiga sannadka ee Premier League kadib 17 gool iyo bandhig cajii ah oo uu soo bandhigay.
Haaheey! mar kale waxaad igu raacday in Jun Mata uu yahay saxiix weyn oo Chelsea ku guulaysatay , mana so saari kartid saxiix kale oo ilaa haatan ka weyn!
Chelsea waxay xiddigaan 2011-kii kala soo wareegtay kooxda Valencia waxayna kasoo bixisay 23 million oo Pound isla marki uu soo gaadhay Satmford Bridg-na waxa uu noqday mid kamid ah xiddigaha ugu hal abuurka sareeya Premier League waxaana isagoona goolasha ka dhalin jiray khadka dhexe .
Markii xigay waxa uu noqday wadnaha kooxda Chelsea weerar kasta oo Chelsea qaadana waxa ay ka iman jireen cagaha Spanish-kaan waxaaana uu sannadkiisi u horeeyay kooxdan ka caawiyay inay ku guulaysato Champions league markeedi u horreysay isagoona sii raacsaday FA Cup isagoona dhaliyey 4 gool halka uu caawiyey 14 kale waxaana uu ahaa xiddigii koonaha kasoo qaaday madaxii uu Drogba ku bareejeeyay Bayern.
Sannadkiisi xigay ayuu ku guulaystay Champions League waxaanu uu soo celiya bandhigiisi Finalka Champions League waxaana uu mar kale soo turay koornihii uu Ivanovic dhaliyey.
Si Kastaba 2 sano iyo badh kabacdi waayihii xiddigan ayaa soo gabagaboobay kadib markii u Jose Mourinho yimi isla markaana u xiddigaan labada jeer ku guulaystay xiddiga sannadka Chelsea ka iibiyay kooxda Manchester United.
2-da Ugu Xun.
Mid kamid ah saxiixyadii ugu yaabka badnaa kooxda Chelsea.
Yuhuudkan waxaa sannadkii 2007-dii bilaash ku keensaday Jose Mourinho
Si Kastaba ha ahaatee daafacan dhexe ayaa fariin xun u diray taageerayaasha waxaana kulankiisi labaad ee Chelsea siduu doono ka yeeshay weeraryahankii kooxda Liverpool Ee Fernando Torres kulan 1-1 ku dhamaaday waxaana u galaaftay Macallinkiisi Mourinho.
Kooxda Chelsea ayaa loo magacaabay Ivam Grant waxaana mar keliya la waayey saxiixii cusbaa ee kooxda isagoona yuhuudkani ku calaacalay ” hadii aan ogaan lahaa in Grant uu tababare u noqon doono Chelsea , waxaan u saxiixi lahaa koox kale”
13 kulan keliya ayuu u saftay kooxda Chelsea ka hor inta aan 2008-dii laga iibinin kooxda Manchester City.
110 Kulan ayuu u ciyaaray kooxda Blues waxaana keliya u ku dhaliyey 20 gool nasib badnaaya ! wuxuu ku guulaystay Champions League , Europe League, FA Cup ka hor inta aanu ka tegi kooxda Chelsea.
Xiddigan ayaa noqday xiddiga ugu qaalisan ee suuqa kooxda Chelsea kadib markii uu lacag ka yaabisay aduunka oo 50 Million ah 2011-kii uga soo dhaqaaqay dhannka Liverpool balse waxa uu ku guul darraystay in uu noqdo faraskii cadaa ee Anfield ololin jiray .
Si Kastaba shaki kuma jiro In Fernando Torres uu yahay mid ka mid ah saxiixyadi ugu xumaa kooxda Chelsea.
Hal Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “Taxanaha Premier League: Faaqidaada Kulamadii Todobaadka, Dabaqa Sare Iyo Kan Hoose Ee Kala Sarraynta Horyaalka, Rikoorada Diiwaan-ka Galay , Faahfaahiinta Goolasha Rooney, 2-dii Ugu Fiicnaa Iyo 2-dii Ugu Xumaa Saxiixyada Chelsea 10-kii Sano Ee U Danbaysay”
siciid January 24, 2017 at 3:36 pm · Edit
Karanaye debay di maria mangala benrake